Izifundo ezili-10 eziBalaseleyo zaSimahla kwi-Intanethi zikaMicrosoft ezineZatifikethi 2022
Ngamana 12, 2022 Chima Godswill
Izifundo ezili-10 eziBalaseleyo zaSimahla kwi-Intanethi zikaMicrosoft ezineZatifikethi
Ukuba ujonge ukufunda ngakumbi malunga nesoftware kaMicrosoft, kukho intaphane yezifundo zasimahla ze-Intanethi zikaMicrosoft ezinezatifikethi ezikhoyo.
Many of these courses offer certificates of completion which can help you boost your career prospects.
Benefits of Free Online Microsoft Courses
1. Intshayelelo yeMicrosoft Excel 2016
2. I-Microsoft Excel 2020 ephucukileyo
3. Intshayelelo yeMicrosoft Word 2016
4. I-Microsoft Word 2020 ephucukileyo
5. Intshayelelo kwi-Power BI
6. Isishwankathelo seSharePoint 2013
7. Ukwakha iiWebhusayithi eziphendulayo ngeBootstrap 3
8. Ukuphuhlisa iWindows Azure kunye neeNkonzo zeWebhu
9. Inkqubo kwi-C # Ukusebenzisa i-Visual Studio 2015
10. Intshayelelo ye-Udacity kwiPython yeSayensi yeDatha
Best Free Online Microsoft Courses with Certificates FAQ:
Ndingayifunda phi iMicrosoft simahla?
Ngaba isiqinisekiso seMicrosoft sifanelekile?
Ingaba zikhona izatifikethi zikaMicrosoft zasimahla?
UMicrosoft sisigebenga sobuchwepheshe esibonelela ngothotho lwesoftware kunye neenkonzo ezinobuchwephesha obunobukho obunamandla kwihlabathi leshishini, kodwa iimveliso zayo zikwasetyenziswa ngabathengi.
FUNDA KUNYE Uluhlu lweeDyunivesithi ezigqwesileyo eSingapore zaBafundi baMazwe ngaMazwe
IMicrosoft ibonelela ngezifundo zasimahla ze-intanethi ezinezatifikethi kuye nabani na ofuna ukufunda ngakumbi ngeemveliso zayo.
Ezi khosi zibanzi kwaye zigubungela uluhlu lwezihloko. Zilungele abantu abafuna ukuphucula izakhono zabo okanye ukufumana ulwazi malunga neemveliso zikaMicrosoft.
I-Microsoft ibonelela ngezifundo ezininzi zasimahla ze-intanethi eziza nezatifikethi zokugqitywa njengoko ezi zifundo zifundiswa ziingcaphephe ebaleni ezibonelela ngobutyebi bolwazi kwizihloko ezahlukeneyo.
Ukongeza kumaxabiso alo mxholo wekhosi, ezi zatifikethi zinokunceda yenza i-resume yakho kwaye ubonise ubuchule bakho kwiimveliso zikaMicrosoft.
Online Microsoft courses are a great way to learn new software or improve your skills, and the good news is that the courses are free, and there are many ones to choose from.
Bagubungela uluhlu lwezihloko, ukusuka kwizakhono ezisisiseko ezifana nokusebenzisa i-Word okanye i-Excel, ukuya kwizihloko eziphambili ezifana neprogram okanye uhlalutyo lwedatha.
Izifundo zilula ukuzisebenzisa, kwaye unokufunda ngesantya sakho.
Zikwabandakanya iikhwizi kunye nemisebenzi yokukunceda ukuba uziqhelanise noko ukufundileyo kwaye ukuba uyabambeka, kuhlala kukho umntu okhoyo wokukunceda.
Ke ukuba ufuna ukufunda ngakumbi malunga nesoftware yeMicrosoft, okanye uphucule izakhono zakho, jonga iikhosi zasimahla zeMicrosoft kwi-intanethi.
IMicrosoft ibambisene nemibutho emininzi ukubonelela ngezifundo zasimahla kwi-intanethi ezibonelela ngezatifikethi zokugqitywa.
Izatifikethi ezifunyenwe kwezi zifundo zinokuba luncedo ekuqhubeleni phambili kwikhondo lomsebenzi okanye ekugqibezeleni izatifikethi ezifunekayo kwimisebenzi ethile.
Basenokuba luncedo ekufundeni izakhono ezintsha kunye nobuchwepheshe.
Uninzi lwezifundo ziyazihambela, ngoko ke zinokugqitywa nangaliphi na ixesha elisebenzayo kumfundi. Kwaye ngenxa yokuba zikwi-intanethi, zinokufikelelwa naphi na ehlabathini.
Apha ngezantsi zezinye zezona zifundo zasimahla kwi-Intanethi zikaMicrosoft ezinezatifikethi;
Ukuba ujonge usetyenziso olunamandla lwespredishithi, iMicrosoft Excel yimpendulo.
I-Excel 2016 ibonelela ngezinto ezininzi ezintsha kunye nezixhasi kwiinguqulelo ezindala ze-Excel. Kweli nqaku, siza kukwazisa kwezinye zeziseko ze-Excel 2016.
I-Excel sisicelo esisetyenziswa kakhulu kwishishini nakwimfundo. Ingasetyenziselwa imisebenzi elula efana nokudala uhlahlo lwabiwo-mali okanye ukulandelela iindleko, okanye kwimisebenzi enzima ngakumbi njengokwenza iifomula kunye neegrafu.
Enye yezinto ezintle malunga ne-Excel kukuba zininzi izixhobo ezikhoyo zokukunceda ukuba uyifunde.
UMicrosoft unikezela ngezifundo zasimahla ze-intanethi ezinezatifikethi, kwaye zininzi ezinye iiwebhusayithi ezibonelela ngezifundo zasimahla kunye neengcebiso.
Kwi-Excel 2016, iMicrosoft yenza utshintsho oluthile kujongano lomsebenzisi, kubandakanya umxholo omtsha omnyama kunye nee icon ezintsha.
IMicrosoft Excel sisicelo sespredishithi esinokusetyenziswa kulawulo lwedatha, igrafu, kunye nohlalutyo lwemali.
I-Excel 2020 ineempawu ezininzi ezintsha, kubandakanya ukukwazi ukwenza imisebenzi eqhelekileyo, ukusebenzisana nabanye ngexesha lokwenyani, kunye nokwenza iitafile zepivot ezishwankathela iiseti ezinkulu zedatha.
Ukuba ufuna ukufunda ukusebenzisa ezi mpawu kunye nokunye, zininzi iikhosi zasimahla ze-intanethi ezifumanekayo ezinezatifikethi zokugqitywa.
IMicrosoft Word 2016 yinkqubo yesoftware eyenza abasebenzisi bakwazi ukwenza, ukuhlela, kunye nokwabelana ngamaxwebhu.
Inika uluhlu olubanzi lweempawu zokunceda abasebenzisi ukuba bavelise amaxwebhu ajongeka njengobuchwephesha, kubandakanywa iitemplates, imixholo, kunye nezixhobo zokwenza kunye nokufomatha umbhalo.
Ukongeza, i-Word 2016 ivumela abasebenzisi ukuba basebenzisane kumaxwebhu nabanye ngexesha langempela kwaye balandele utshintsho olwenziwe kuxwebhu.
Isenokusetyenziswa ukwenza nokulawula i-spreadsheets kunye nomboniso.
IMicrosoft ibonelela ngeekhosi ezahlukeneyo zasimahla ze-intanethi ezinezatifikethi ezifundisa indlela yokusebenzisa i-Word 2016.
Izifundo zenzelwe abasebenzisi bawo onke amanqanaba amava, ukusuka kwabaqalayo ukuya phambili.
Zibandakanya izifundo zenyathelo ngenyathelo kunye neekhwizi ukunceda abafundi bafunde iimpawu zesoftware.
Ekugqityweni kwekhosi, abafundi banokukhuphela isatifikethi sokugqiba.
I-Microsoft Word kudala iyinkqubo yokusetyenzwa kwamagama kumashishini nakubantu ngokufanayo.
Kodwa ngoluhlu lwayo oluhlala lukhula lweempawu, kunokuba nzima ukuhambisana neziseko, singasathethi ke ngezo eziphucukileyo. Kulapho iikhosi ze-intanethi zinokuza luncedo.
IMicrosoft ibonelela ngoluhlu lwezifundo zasimahla ze-intanethi ezinezatifikethi, ukusuka kwabaqalayo ukuya kumanqanaba aphezulu.
Izifundo zinkulu, zihlala phakathi kweyure enye neyesibini, kwaye zigubungela uluhlu lwezihloko ukusuka ekudaleni amaxwebhu asisiseko ukuya ekusebenzeni ngeetafile kunye nemizobo.
Eyona nto imnandi ngezi zifundo kukuba ziyazihambela, ngoko ke unokufunda ngesantya sakho.
Kwaye wakuba ugqibile ikhosi, ungaprinta isatifikethi ukubonisa izakhono zakho ezitsha.
IMicrosoft Power BI yisuti yezixhobo zobuntlola kwishishini kwi-intanethi ezikuvumela ukuba ubone kwaye uhlalutye idatha yakho.
Ungayisebenzisa ukwenza iingxelo, iideshibhodi, kunye neegrafu ezikunceda ukuba uqonde idatha yakho kwaye wenze izigqibo ezingcono.
IPower BI isimahla ukuyisebenzisela ubuqu, kwaye kukho iikhosi ezininzi ezikhoyo kwi-Intanethi eziya kukufundisa indlela yokuyisebenzisa.
Nje ukuba ufunde ukusebenzisa i-Power BI, unokwenza iingxelo zeshishini lakho okanye umbutho.
I-Microsoft SharePoint 2013 liqonga lesicelo sewebhu elikuvumela ukuba uyile kwaye wabelane ngeewebhusayithi kunye nosetyenziso lwewebhu.
Ibonelela ngendawo esembindini yawo onke amaxwebhu eqela lakho, kwaye ikunika ukukwazi ukusebenzisana ngokulula nabanye kwiiprojekthi. Ungasebenzisa i-SharePoint 2013 ukwenza iwebhusayithi yeshishini lakho, okanye ungayisebenzisa ukulawula ubukho bakho be-intanethi.
Enye yezona zinto zilungileyo malunga neSharePoint 2013 kukuba isetyenziswa simahla. Awudingi ukuthenga nayiphi na isoftware okanye ihardware ukuze uqalise.
Ekuphela kwento oyifunayo yikhompyuter esebenzayo Windows 7 okanye kamva, kwaye unokufikelela kwi-SharePoint 2013 kuso nasiphi na isikhangeli sewebhu.
I-SharePoint 2013 nayo iza nenani leempawu ezakhelwe ngaphakathi ezenza kube lula ukuqalisa. Ngokomzekelo, kukho iitemplates ezikhoyo ezikuvumela ukuba wenze ngokukhawuleza iwebhusayithi okanye isicelo sewebhu.
I-Bootstrap sesinye sezona zikhokelo ziphambili ezithandwayo zokuphuhlisa iiwebhusayithi eziphendulayo, eziphathwayo zokuqala.
I-Bootstrap ibandakanya izinto ezininzi ezakhelwe ngaphakathi, ezinje ngamaqhosha, iicarousels, kunye nemivalo yokukhangela, onokuyisebenzisa ngokukhawuleza ukwakha iwebhusayithi yakho.
I-Bootstrap ikwabandakanya inkqubo yegridi ekuvumela ukuba wenze ngokulula uyilo oluphendulayo.
Inkqubo yegridi isebenzisa indibaniselwano yeeklasi zekholomu kunye neeklasi zerowu ukwenza iiplani ezahlukeneyo. Unokusebenzisa izixhobo ze-flexbox ukwenza uyilo olunzima oluphendulayo.
Ukuba ufuna ukufunda ukusebenzisa i-Bootstrap, kukho inani lezifundo zasimahla ze-intanethi ezifumanekayo ezinezatifikethi.
IMicrosoft ibonelela ngekhosi yasimahla ekwi-intanethi ebizwa “Yenza iiWebhusayithi eziphendulayo ngeBootstrap 3” equka izifundo zevidiyo kunye nokuzilolonga.
UMicrosoft ubonelela ngenani elikhulu lezifundo zasimahla ukunceda abaphuhlisi bafunde malunga nokuphuhlisa iWindows Azure kunye neenkonzo zewebhu.
Izifundo ziyafumaneka kwi-intanethi kwaye zibandakanya izatifikethi zokugqiba ezinokuthi zisetyenziswe ukubonisa ubuchule bakho kubaqeshi abanokubakho.
Ezi khosi zigubungela izihloko ezahlukeneyo, ukusuka kwiintshayelelo ezisisiseko ukuya kwiikhonsepthi eziphambili.
Bafanelekile kuye nabani na ofuna ukufunda indlela yokuphuhlisa usetyenziso olusekwe kwilifu okanye ukuphucula izakhono zabo kule ndawo.
Elona candelo lingcono kukuba iikhosi zisimahla – awudingi kuhlawula nantoni na ukuze uzifikelele.
Ke ukuba unomdla wokufunda ngakumbi ngeWindows Azure okanye iinkonzo zewebhu, qiniseka ukuba ujonga inkqubo yoqeqesho ye-intanethi yeMicrosoft.
Inxalenye engcono kukuba izifundo simahla ngokupheleleyo akukho mfuneko yokuba uhlawule nantoni na ukufikelela kuzo.
Ukuba ujonge ukuya kumdlalo wakho wesayensi yedatha, i-Udacity inekhosi yakho. Ikhosi "Intshayelelo yePython yeSayensi yeDatha" inikezelwa kwi-intanethi simahla kwaye inikezela ngesatifikethi sokugqitywa.
Ikhosi yeeveki ezili-12 yenzelwe abaqalayo, kwaye akukho lwazi lwangaphambili lweprogram olufunekayo.
Ikhosi iqala ngokukufundisa indlela yokufaka iPython kunye nokusebenza kunye neziseko zayo ezisisiseko. Emva koko uya kufunda ukusebenzisa amathala eencwadi ukulayisha idatha, ukuyicoca, kunye nokwenza uhlalutyo olusisiseko.
Kuyo yonke le khosi, uya kufunda ukwenza iimodeli kunye nokuqikelela iziphumo usebenzisa iPython.
Wakuba ugqibile ikhosi, uya kuba nakho ukwenza imisebenzi yesayensi yedatha eqhelekileyo usebenzisa iPython. Kwaye ukuba oko akwanelanga, i-Udacity ibonelela ngoluhlu lwezinye iikhosi zesayensi yedatha ezinokukunceda ukuphuhlisa ngakumbi izakhono zakho.
Kukho iindlela ezimbalwa onokukhetha kuzo ukufunda iMicrosoft simahla.
Eyokuqala kukujonga iMicrosoft Virtual Academy, ebonelela ngeetoni zezifundo zasimahla kwiintlobo ngeentlobo zetekhnoloji yeMicrosoft.
Olunye ukhetho kukukhangela iikhosi zasimahla ze-Intanethi kwiiwebhusayithi ezinjengeCoursera okanye i-Udemy.
Okokugqibela, unokufumana izibonelelo ezininzi eziluncedo kunye nezifundo kwiwebhusayithi yeMicrosoft.
Isiqinisekiso seMicrosoft sinokuba yi-asethi exabisekileyo kumsebenzi wakho, kodwa akusoloko kulufanele utyalo-mali.
Eyona nto ibalulekileyo ekufuneka uyiqwalasele kukuba uya kusisebenzisa na isatifikethi ukuphucula izakhono zakho kunye nokuqhubela phambili umsebenzi wakho.
Ukuba impendulo nguewe, ke isiqinisekiso seMicrosoft sinokukufanela.
Azikho izatifikethi zeMicrosoft zasimahla, kodwa zininzi iindlela ezifikelelekayo zezatifikethi. I-Microsoft ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zesatifikethi, kuquka i-MTA, i-MCSA, i-MCSE, kunye ne-MCSD. Uninzi lwezi ziqinisekiso zinamanqanaba amaninzi, ngoko unokuqhubeka nokuphucula izakhono zakho kunye nolwazi ngokuhamba kwexesha.
Zininzi izatifikethi zikaMicrosoft zasimahla ezikhoyo. Nangona kunjalo, iziqinisekiso ezidume kakhulu kunye nezamkelwa kakuhle ziza kunye nethegi yexabiso.
Nangona kunjalo, zininzi iinketho ezifikelelekayo kwabo bafuna ukulandela isatifikethi seMicrosoft.
Ke, nokuba ujonge ukuqalisa kwikhondo lakho le-IT okanye ufuna ukuthatha izakhono zakho uzise kwinqanaba elilandelayo, kukho isatifikethi sakho esingayi kwaphula ibhanki.
Post Previous:Izikolo ezi-6 eziPhezulu zeCulinary eMiami | Iintlawulo & neenkcukacha
Okulandelayo Post:Uluhlu lwezona zikolo zi-6 ziPhambili kwiCulinary eGeorgia | Iintlawulo & neenkcukacha